Imilinganiselo yamaXabiso angaDibaniyo | Ulwazi malunga nenkampani Shanghai Sunshine Technologies Co., Ltd., izabelo zokutshintshana Shanghai Sunshine Technologies Co., Ltd.
Ubushushu kwezonyango Melula
Ngenxa yefuthe lobhubhane, imilinganiselo yeqondo lobushushu sele iyinxalenye yobomi babantu bemihla ngemihla. Ngenxa yokungadibani nayo, impendulo ekhawulezileyo kunye nokulula ukuyisebenzisa, ithemometha ye-infrared isetyenziswe ngokubanzi kwisango lezithuthi, esibhedlele, kwindawo yokuhlala, kumashishini nakumaziko opapasho. Izixhobo ezisetyenziselwa ukulinganisa ubushushu be-infrared zingahlulwa zibe ziindidi ezimbini: izixhobo zokuhlola ubushushu be-infrared thermal kunye ne-infrared thermometers.
Izixhobo zokuhlola ubushushu be-infrared thermal zingasetyenziselwa ukujonga indawo enkulu kwiindawo zikawonke-wonke ezinokuxinana kwabantu. Iyakwazi ukulandelela ngokuzenzekelayo kunye ne-alamu kwiindawo ezinobushushu obuphezulu, kwaye isebenzisane nevidiyo ekhanyayo ebonakalayo ukufumana ngokukhawuleza kunye nokulandelela abantu abanobushushu obuphezulu bomzimba. Xa idibanisa ukuqondwa kobuso, iprosesa yeselfowuni kunye nobunye ubuchwephesha, inokuthi ibenolwazi ngakumbi malunga nabantu abanobushushu obuphezulu bomzimba.
I-thermometer ye-infrared inokwahlulwa ibe yithemometha yeendlebe ze-infrared kunye ne-infrared thermometer yebunzi. Ithemometha ye-infrared inezibonelelo zokwakha okulula, ukusetyenziswa okulula kunye nokuphendula ngokukhawuleza, okunokuthi kuqonde ukulandelelana kunye nokukhawuleza kobushushu babasebenzi.
Imilinganiselo yoBushushu beMizi-mveliso
Indawo yoqhakamshelwano lwesivamvo sobushushu bendabuko kufuneka sifakwe kumphezulu wethagethi yokufumanisa, ke kufuneka ithathele ingqalelo iimpawu zomzimba zendlela ekunokuqhagamshelwana nayo, njengokubambelela, ukubola, ukunxiba njalo njalo, njengesiphumo I-temperautre sensors zikhawulelwe kwisithuba kunye noluhlu lokufumanisa. Ngelixa ii-infrared sensors ze-infrared zinokubona ekujolise kuyo umgama omde kwaye zisetyenziswe kwiimeko ezingafikelelekiyo. Ngophawu ekulula ukuluthwala, olulungele ukulinganiswa, kunye nobubanzi obubanzi bokufumana ubushushu, ii-infrared sensors sensors zisetyenziswa ikakhulu ekusebenziseni ukuqikelela kunye nokuthintela ukugcinwa kwemizi-mveliso, kwaye zisetyenziswe ngokubanzi ekufumaneni amandla ombane, amashishini, i-petrochemical, ukuhamba kaloliwe, ukwakha ulondolozo lwamandla kunye nezinye iinkalo.